Madaxweynaha Jubbaland oo ku wajahan Kisamaayo & qodobada horyaal
May 31, 2021 Xuseen 1
Puntlandtimes (Muqdisho)-Madaxweynayaasha Dowlad Goboleedka Jubbaland Mudane Axmed Maxamed Islaam iyo wafti uu hoggaaminayo ayaa ku wajahan magaalada Kismaayo ee xarunta u ah xilligaan maamulka Jubbaland kadib muddo uu ku sugnaa Muqdisho.
Madaxweyne Axmed Maxamed Islaam ayaa waxa uu Magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya kaga qaybgalay shirkii lagu saxiixay heshiiska doorashada ee ka dhacay teendhada Afisiyooni, iyaga oo sidoo kale la kulmay madax kala duwan.
Madaxweyne Axmed Maxamed Islaam ayaa dhowaan magaalada Muqdisho kaga qaybgalay shirkii arrimaha doorashada oo dhinacyada siyaasadda Soomaalidu heshiis ugu kala saxiixdeen heshiiska arrimaha doorashada Soomaaliya.
Axmed Maxamed Islaam ayaa marka uu ku laabto magaalada Kismaayo wadxa uu si rasmi ah u guda geli doonaa arrimaha doorashada gaar ahaan wax ka beddelka xubno ka tirsan guddiyada doorashooyinka heer Federaal oo cabasho ka timid.
ward lord dagaal ooge local president , xaafad kismaayo ku taal ku hoydaa maskiin Ahmed kinyaati